जीवनको मुल्य र बाँच्नुको सार्थकता- अमित संग्रौला
जीवन के को लागी हो, प्रेम बिवाहा वासना सन्तान प्राप्ति अरु केही हो ? किन बाच्दछन ? बाँच्नुको सार्थकता के हो ? जीवनको खास मुल्य के हो ? यसकै वरिपरि जीवन केन्द्रित छ । म चाही मान्छेहरू बाँची रहेको मात्र देख्छु जीवन जिउनु जान्दैनन मान्छेहरू सरल र सहज रूपमा । मान्छेहरु यतिसम्म ब्यस्त हुन्छन जहाँ उनीहरु लाई श्वास फेर्ने समेत फुर्सद हुदैन, उनीहरु भनी रहेका हुन्छन मलाई सास फेर्ने समेत फुर्सद छैन । कसरी जिउँछन ति ब्याक्तीहरु उनीहरुको जीवन कस्तो हुन्छ ? जीवनको मुल्यलाई न बुझ्नेहरु आफु स्वयमलाई जान्न सकिरहेका हुदैनन । जीवनको मुल्य धेरै छ ।आफुलाई बुझ्न सक्नु चिन्नु सक्नु त परमात्माको दर्शन हुनु जस्तैः हो । अहिलेको समयमा भौतिकबादी यश आराम जिन्दगी जिउन चाहेका हुन्छन ।
अहिलेका मान्छेहरुमा आध्यात्मिक चेत छैन । यद्यपि केही फरक त आएको त छ नै । जो सकारात्मक छ जीवनमा आउने विविध पक्ष अफ्ट्यारा परिस्थितिहरुलाई सामना गर्न सक्छ । सकारात्मक पक्षमा नकारात्मक कुरा र नकारात्मक पक्षमा सकारात्मक कुरा देख्नु सक्नु पर्दछ । अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्दछ, अनुशासन भनेको के हो ? थाहा छ , जीवनमा अनुशासनमा बस्न चाहदैनन । कर्तब्य भनेको के हो थाहा छ , कर्तब्य पालना गर्न मान्दैनन । समाजमा आ-आफ्नै तरिकाले जिन्दगी जिइरहेका देखिन्छन । अहिलेको युगमा बडो गजबले जिन्दगी बाची रहेका हुन्छन । आफ्नै स्वभाव र स्वार्थमा जिउछ्न जिन्दगी । तर म भन्छु आफ्नो मात्र नभइ परिवार देश समाजको लागी बाच्नु जान्नुपर्दछ । पृथ्वीमा एकचोटी जन्म लिएपछि समाज र देशको लागी केहि गर्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ नि जन्म सामन्य भए पनि मृत्यु चै इतिहास बनोस । हामी खुशी हुनलाई के के गर्छौ ? पैसा कमाउछौ घर बनाउछौ, आरामको जिन्दगी जिउन चाही रहेका हुन्छौं ।
आफ्नोको लागी मात्र सोची रहेका हुन्छन । मान्छेको स्वभाव पनि अचम्मको लाग्दछ । लोभ ईष्र्या कुरैटेपन अरुको चासो लिने अरुबाट अपेक्षा राख्ने । यस्ता नेपालीका स्वभाव हुन । खास रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेका आधुनिक मान्छेहरुले आफ्नो अस्तित्व नै बिर्सिएका छन । जीवन के हो ? म किन बाचीरहेको छु भन्ने बोध जीवनमा आयो भने जीवनमा बाच्नुको सार्थकता आउछ । मचाही आफ्नो मात्र नभई समाज परिवर्तन र रुपान्तरणको लागी बाच्न चाहन्छु । धूम्रपान मध्यपान रहित समाजको कल्पना गर्छु । समाज दिव्य बनोस, हरेक मान्छेमा आध्यात्मिक चेत होस भावना होस सबै मान्छेहरु असल बनुन । भन्ने चाहना राख्दछु बिवाहा गर्नु वासनाको आनन्द लिनु छोराछोरी बनाउनु हुर्काउनु पढाउनु त जस्ले पनि गर्छ नै । यत्तिकैमा जीवन जिएर सकिदैन अत जीवनको मुल्यलाई हेर्नुपर्छ । जीवनमा जिउनुको सार्थकता चै के हो ? सकारात्मक दृष्टिकोण स्वास्थ जीवन तन मन स्वास्थ हुनु ।
हाम्रा असिमित चाहनाहरु पुरा हुदै जानु र अम्तिम चै मोक्ष प्राप्त गर्नु सार्थक जीवन होला बाच्नुको । हाम्रो जीवनमा काम क्रोध लोभ महले दु:ख दिरहेका हुन्छन । ति कुराहरुबाट बच्न सक्नुपर्छ । योग ध्यान जीवन नै उत्तम हो । उमेर बढ्दै गएपछि समय अनुसार आफ्ना इच्छा आंकाक्षा आफ्नो मन विचार भावना पनि परिवर्तन हुन्छन । मान्छे पौद अबस्थामा पुगेपछि मान्छेले हास्न नै बिर्सी दिन्छन । छोराछोरीहरुले हास्दा यो समय हास्ने हो भन्दिन्छन । जीवनमा त उत्साह उमंग जोस जागर अनुहारमा नेचुरल हसाइ र सरल असहज परिस्थितिहरुलाई सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । यहीँ त होनी बाच्नुको सार्थकता सकारात्मक र स्वास्थ जीवन जिउनु नै जीवनको मुल्य हो कोही कोही हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । हतार हतारमा खान्छन हतार मै बोल्छन हतार भए गरि काम गर्छन् र हतार गर्दागर्दै मर्छ्न । जो जीवनमा इमानदारीताको साथ जीवन जिउछ र सत्य लाइ आत्मसात गरेर गर्छ भने तिनीहरुको जीवन सुखमय बन्दछ ।
जीवनमा पैसा कति कमायौ भन्दा पनि आफ्नो जीवन देखी कति खुशी छौ त्यो महत्त्वपूर्ण हो । कहिलेकाही समाज बसेर पैसा मात्रै कमाउन खोज्छौ र पैसा कमाउदैमा जिन्दगी बितिसकेको हुन्छ । समाज सेवाका कार्यहरु गर्ने, थोरै थोरै भए पनि चंदा दान गर्ने गर्नु पर्दछ । उत्साह उमंग सकारात्मक अनुशासन भएर जीवन जिउन सक्नुपर्छ । कहिलेकाही परिवारको साथ तिर्थयात्रामा जाने , रमाउने घुम्ने जीवनका खुसीहरु बाड्ने गर्नुपर्छ । यहीँ कुराहरु त होनी हामीले चाहेका हुन् । जीवनमा जस्तो कर्म गर्छौ त्यस्तै फल प्राप्त गर्छौ र जीवनमा राम्रो कर्म गरेम भने जिन्दगी सुन्दर बन्दछ । जीवन जिउनुको सार्थकता भनेको मनलाई पवित्र बनाउनु पनि हो । हरेक मान्छेहरुलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नु सक्नुपर्छ ।
हामी समाजको सामाजिक प्राणी भएकाले मेलमिलाप प्रेम भाइचाराको नजरले हेर्नुपर्छ । आफुले चिन्यो भने बाच्नुको अर्थ हुन्छ र आफुले चिनेसकेपछि मर्नुको कुनै दु:ख हुदैन । जीवन मुल्य त यहाँ छ आफुले आफुलाई जानेको छ चिनेको छ । जीवन र जगतलाई राम्रोसँग हेर्नु सक्नुपर्छ । जो जीवनमा हासीहासी जिउछ तनाव शोकरहित जिउछ , स्वास्थ जीवन सकारात्मक भएर बाच्न सक्नु नै हाम्रो जीवन सार्थक बन्छ र जीवनको मुल्य यही हो ।
अमित संग्रौला बिर्तामोड
प्रकाशित मिति: 2018-01-18 12:48:29
गजल-काफल पाक्यो भनी चरीले गीत गाएको छ- रामचन्द्र भट्टराई
गजल- माया प्रेममा मत्त्याएर जानेहरु याद राख- स्मृती कंडेल